ကျမဖုန်းထဲသို့ ရောက်ရှိလာသော Message တခု ~ White Angel
ကျမဖုန်းထဲသို့ ရောက်ရှိလာသော Message တခု
4:17 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 18 comments
It has (5)Fridays, (5) Saturdays and( 5) Sundays in 1 month.
This happens once in (823) years. These are known as money bags.
Pass this along to 8 good people and money will appear in4days based on the Chinese Feng Shui.
Those who stop it will experience none.
2010 နှစ်၏ ယခုရောက်ရှိနေသော October လသည် အထူးခြားဆုံးလ ဖြစ်သည်။
အကြောင်းမှာမူ ပုံမှန်အားဖြင့် သောကြာ၊ စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တို့သည် ၁လအတွင်း ၄ကြိမ်နှင့် ၅ကြိမ်ရှိတတ်ကြသော်လည်း သောကြာ၊ စနေနှင့် တနင်္ဂနွေ ၃နေ့လုံးမှာ ၅ကြိမ်အဖြစ်ဖြင့် ၁လအတွင်း တူညီစွာ ကျရန်မှာခဲယဉ်းလှပေသည်။
ဤအဖြစ်အပျက်မျိုးမှာ ၈၂၃ နှစ်တွင် ၁ကြိမ်သာ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်အတွက် ထူးခြားသောလဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
တရုတ်လူမျိုးများကမူ “ Chinese Feng Shui” အနေဖြင့် ငွေများ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဝင်မည့် အယူ နမိတ်ကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော စာပိုဒ်ကို နီးစပ်ရာသူငယ်ချင်းများဆီသို့ Forward message များပို့လျှက်ရှိရာ ကျမထံသို့ ရောက်ရှိလာသဖြင့် စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းများဆီသို့ လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေလိုက်ရပါသည်ရှင့်...။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ.....
တို့အရင်ဆုံးကံကောင်းမှာ နော့ မနမ်း
ဟီးဟီး ပျော်စရာကြီး သိန်းထောင့်ငါးရာထီပေါက် ပါစေ. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုတောင်းတာ
ထူးထူးခြားခြား message လေးကို လာဖတ်သွားတယ်။ ကံကောင်းခြင်းတွေရတော့မှာပေါ့နော်။ မျှဝေပေးတဲ့သူလည်း ကံကောင်းခြင်းတွေ ထာဝရပိုင်ဆိုင်ပါစေ...။
ပေးတဲ့ ကံကောင်းခြင်း လက်ဆောင်ကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံယူသွားပါတယ်ဗျာ။
ပေးသူလည်း ထပ်တူထပ်မျှ ရရှိပါစေ။
အဲလိုလား ကျွန်တော်လည်း လိုက်ဖြန့်လိုက်ဦးမယ်..။ တကယ်ပဲ အစ်မပြောမှ သတိထားမိတော့တယ်..။
ကံပေါ်ရင် ပြန်လျော်ပေးလိုက်ပေါ့ (ဘာလဲမသိ)
နတ်သမီးပြောမှ သတိထားကြည့်မိတယ် ကိုယ့်ရှေ့က ပြက္ခဒိန်ကို....။ ထူးခြားတဲ့ လပေပဲ...ဒီလက သီတင်းကျွတ်ဆိုတော့ လူကြီးတွေသွားကန်တော့ရမှာ..မုန့်ဖိုးရဦးမယ်..။
ပြီးခဲ့တဲ့ August လတုန်းကကျတော့
တနင်္ဂနွေ တနင်္လာ အင်္ဂါ နေ့တွေက ၅ရက်ဆီဖြစ်လို့ ထူးခြားတဲ့လဆိုပြီး ခွန်ဆီလည်း အဲဒီလိုမျိုး သူငယ်ချင်းက ပို့ပေးသေးတယ်။ ဒီလတော့ မပို့ လာတော့ဘူး... ;P
ခွန်လဲ အမှတ်တရဆိုပြီး အဲဒီပြက္ခဒိန်တွေ သိမ်းထားတယ် အစ်မရေ... ;)
ဟုတ်လားလို့လည်း ပြက္ခဒိန် ပြန်ကြည့်တော့
ဒါနဲ့..ငွေတွေအစုလိုက် အပြုံလိုက် ဘယ်ကနေ
တကယ်အစုလိုက် အပြုံလိုက် ၀င်မှာလား
မယ် ဟုတ်ရင်တော့ဟုတ် မဟုတ်ရင်တော့
နတ်သမီးဆီကို မန်နစ်ရှိတ်နဲ့ ပြန်လာတောင်း
မယ် ဟီးးးးးးးး :D :P
ကံကောင်းခြင်းတွေကို လာယူရင်း.. ကံကောင်းပါစေလို့ ပြန်ဆုတောင်းပေးသွားပါကြောင်း....
ခုမှပဲ ပြက္ခဒိန်ကိုသေချာကြည့်မိတယ်၊ တော်သေးတယ် ၂၁ ရက်ပဲလုပ်ရလို့
ကံကောင်းခြင်းတွေကိုနောက်ဆုံးမှ ခံယူသွားတယ်ဗျား)
ရောက်လာပါတယ်နတ်သမီးရေ ပို့စ်အသစ်ကလေးလည်းလာဖတ်သွားပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်တချို့လူတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့လ တလ တနှစ်မှာတခါရှိတတ်တယ်ဆိုတာ ယုံရမလိုလို ဖြစ်နေတာ် တကယ်လည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ကြုံ ခံစားခဲ့ဘူးလို့ပါ။